हिंसात्मक प्रदर्शनपछि चिलीमा राष्ट्रपतिद्धारा संकटकालको घोषणा | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more हिंसात्मक प्रदर्शनपछि चिलीमा राष्ट्रपतिद्धारा संकटकालको घोषणा
कात्तिक २ गते, २०७६ - १६:३३
चिली । चिलीको सान्टियागो राज्यमा शुक्रबार संकटकालको घोषणा गरिएको छ ।
मेट्रो टिकटको मूल्यबृद्धि भएको विरोधमा हिंसात्मक आन्दोलन भएको भोलीपल्ट चिलीका राष्ट्रपतिले संकटकालको घोषणा गर्नुभएको हो । संकटकालघोषणासँगै सुरक्षाको जिम्मेबारी सेनालाई दिइएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
शुक्रबार भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीकाबीचमा धेरै ठाउँमा झडप भएको थियो । प्रदर्शनकारीले स्टेशन र सवारी साधनहरुमा आक्रमण गरेर क्षति पु¥याएका छन् ।
प्रदर्शनकारीको तोडफोडका कारण कम्तीमा १६ ओटा बस र दर्जनौ स्टेशनहरु क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
मध्यरातमा राष्ट्रपति सेबास्टीअन पिनेराले संकटकाल लागु गरिएको घोषणा गरे। उनले अहिलेलाई १५ दिनका लागि मात्रै संकटकाल लागुहुने उल्लेख गरेका छन् । एएफपी
कात्तिक २ गते, २०७६ - १६:३३ मा प्रकाशित
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई सहज र छरितो बनाउन सबै मन्त्रालयका भवन एउटै स्थानमा...
स्मार्ट फोनको कारण यौनजीवन बर्बाद !
एजेन्सी । स्मार्टफोनको अत्याधिक प्रयोगको कारण यौन जीवननै बर्बाद हुन पुगेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको...
काठमाडौँ । मोडल खुस्बु ओलीलाई दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । लेनदेन सम्बन्धी विवादमा दायर मुद्दाको...
विश्वमै फैलिँदै कोरोनाको त्रास, सङ्क्रमितको सख्या कुन देशमा कति पुग्याे ?
काठमाडौं । वैज्ञानिकहरुले कोभिड–१९ नाम दिएको नयाँ कोरोना भाइरसबाट विश्वमा शुक्रबार मध्यान्नसम्ममा...
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सबैको प्रयासले स्थानीय न्यायिक समितिबाट अधिक...
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य सडक केही वर्ष अघिसम्म दिउँसै धुलाम्मे देखिन्थ्यो । मोटरसाइकल...
दक्षिण कोरियामा एकैदिन ५ सय ९४ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण